isitayela Rustic emaqaqasini indlu ezweni unyaka nonyaka iyaduma ngaphezulu. Lokhu kuchazwe kalula. abantu Modern, ikakhulukazi lawo ayehlala emzini, ukhathele ingilazi, ukhonkolo, zokwenziwa yokuqedela izinto. Ingaphakathi izici angadle ngabuhle obutheni-style ukusebenzisa zemvelo, izinto imvelo kuphela. Kodwa lula sobala kwenza kube ngisho nangokwengeziwe.
isitayela Rustic kuleli zwe, endlini lizwe ezikhangayo ikakhulukazi. Sihlanganisa Amathrendi zamanje kanye esidlule. Ezweni ngalinye, lesi sitayela livele libe nezici kazwelonke (Provence, idlelo American, izwe). Kodwa zikhona izingxenye ezibenza babe munye:
kokuqeda izindawo nge ngezinto zemvelo;
ukusetshenziswa ngezandla izinsimbi;
ifenisha, elula ngefomu;
Uma uthi nhlá kungase kubonakale sengathi ukuxhuma ngokwanele zonke lezi zingxenye futhi uthola isitayela rustic. Kodwa namuhla, designer izici ezintathu eziyinhloko: isiFulentshi, isiNgisi nesiRashiya. Ngaphezu kwalokho, in the world of wokwelusa ethandwa isiNtaliyane, isitayela zaseScandinavia, idlelo American. Zonke lezi izinhlobo izici zabo nemininingwana ethileko.
isitayela Russian angadle ngabuhle obutheni
Lokhu samuntu lula nokuzwana. Lapha ubusa izinkuni zemvelo. Futhi hhayi kuphela ukuhlobisa izindonga futhi Uphahla lwangaphakathi, kodwa futhi ifenisha ngisho izitsha. Ifenisha isebenzisa elula, ngokuvamile aphelele isiqu elingaphakathi esihlalweni unyakazisa. Ngemishayo semishayweni ihlale ivulekile, njengoba lalinjalo elidala maqhugwane Russian. Phansi ngokuvamile enziwa amabhodi sokhuni. Ungasebenzisa ubudala, kodwa ukunikezwa ngesimo efanele.
Russian isitayela rustic emaqaqasini indlu ezweni izitshela ukuthi esithandweni somlilo. Akubona bonke abanikazi ufuna ukwakha okukhulu isitofu acakiwe, kodwa eliqoshiwe design isethi kuyadingeka. Ngo ingcosana, ungasebenzisa panel ngakuthathu, belingisa kuhhavini. Ukuze inqwaba jikelele Ukugunda izingodo kanye hala.
Ifenisha kule mikhaya ngokuvamile efakwe ukukhanya, ngaphandle ubukhazikhazi kakhulu. Likhanyise Igumbi isibani ngumthunzi, kanye kaphalafini eliqoshiwe. Abama isitsha, ulahla izakhi plastic - ubumba kuphela, ukhuni ingilazi. Izibalo ubumba ingasetshenziswa njengendlela nezinsiza.
Lokhu isitayela rustic emaqaqasini indlu ezweni kusekelwe imibala egqamile kanye iyashintsha iyaphupha ibe shades of eluhlaza. Izakhi Decor, kubonelelwa kakhulu ama-red. Izindwangu akukhetha ukukhetha iyashintsha iyaphupha ibe imibala. Lapha, njengoba kule samuntu langaphambilini, ukuvula kuvunyelwe ophahleni.
Izindonga ukuhlobisa itshe. Le nqubo ikuvumela ukuba uzizwe sengathi awekho indlu yezwe, njengoba e inqaba ephakathi. Futhi-ke, kufanele ibe yindawo eziko. Kungenzeka ukufaka igesi, inketho kagesi noma yendabuko - ukukhetha kuncike kuphela izifiso umninindlu.
Kuyinto efiselekayo ukuthi ifenisha wayesemdala, noma okungenani yayibukeka njengesikhonyane. Empeleni, manje selisetshenziswa yokufakelwa amasu ukuguga ukhuni, kodwa uma kusadingeka prababushkin iKhabhinethi, kuyoba Ukugunda kakhulu.
Uma uthanda isitayela rustic emaqaqasini ezweni indlu (English version), kumele wazi ukuthi kuleli cala osebenza ngokhuni ukukhanya kuphela. Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo khona iziko (kagesi, igesi). Ukubeke eduze esihlalweni ukhululekile nge yokubeka kanye emuva okusezingeni eliphezulu noma kusofa.
Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe ukuvulwa window. Kufanele ibe nkulu namafasitele kuzo - ihlukene. Amakhethini isitayela rustic (ngesiNgisi) kumele kwenziwe lendwangu zemvelo yezinyoni. Isibonelo esifanayo kufanele lisetshenziswe Upholstery.
Izindonga zendlu, kulesi simo avame hang lodonga nge wezimbali noma umbala. Ngokuvamile, imibala eyinhloko azotho, obomvu, oluhlaza. Ifenisha kudala umbono endala. Interior izibani aphelele, imidwebo, ababulawa ngaphansi ubudala.
Yakhelwe in isitayela rustic is ezidalwe zisuselwa izinto ezifana ngokhuni, ngamatshe, izinto ezenziwe ngobumba, isikhumba, nelineni nokotini. Izindonga kuvame sheathe yemvelo ukhuni panel noma ngokhuni, okungaba isandla-Imi imiklamo ukuthi ukudala yinduduzo egumbini.
UPawulu, futhi, zingenziwa ngokhuni noma ngamatshe. Ukuze indlu ezweni ifaniswe imibala ukuletha abagibeli bayo nemvelo - ukukhanya, shades yemvelo kanye nemisindo. Ungasebenzisi isitshalo imidwebo ehlotshisiwe.
Ukuze Igumbi (noma indlu ngokuvamile) iye exquisitely ehlotshisiwe, ungasebenzisa izimbali sobumba, izingubo zokulala indawo phezu kombhede. Ifanele ekhishini efrijini e style Retro, kanye nazo zonke izinto ukudala umbono endala. Futhi elinye icebiso. Ukudala isitayela rustic elingaphakathi lendlu ezweni, ugcine umuzwa Ingxenye. Akumele wenze omningi isikhala letigcogcwe ngaphambilini izimfanelo yasemakhaya, nje usebenzise akhethwe kahle, eliphezulu izinto ezimbalwa.
Manje ake sibheke ezinye izindlela ukuklama amakamelo izibonelo ezishaya emhloleni zendlela azisebenzisa amakamelo ehlukene.
Thina ngizoqala ukuthi kwesisekelo, ngoba kubangela eziningi imibuzo kusuka abanikazi. Zinjani ke? Emakamelweni ezweni isitayela - onesizotha ubuhle enesizotha nenduduzo.
Phansi kanye izindonga
Iningi zokulala Abaklami ukholelwa ngokuqinile ukuthi akunakwenzeka ukuba bakhe isitayela sokugqoka angadle ngabuhle obutheni, usebenzisa ngezinto zokwakha zesimanje emaqaqasini indlu ezweni. Ngokungangabazeki, kungcono ukusebenzisa okhunini oluqinile noma ebhodini. Kodwa intengo izinto ezinjalo impela high, ngakho-ke ayitholakali kuwo wonke umuntu. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi izinto zemvelo ungayithola enye by eliphezulu yokufakelwa analogue.
Kaningana, asezindongeni odongeni, ulingisa ukhuni noma asezindongeni. Njengomthetho, basuke enamathiselwe komunye, ngokukopisha ebhodini. Umbala izindonga ekamelweni kungcono ukukhetha emzaneni uza yemvelo - azure ukukhanya, omhlophe, ugodo blue. Kufanele kube nje ingemuva ifenisha yandiswe ingaphakathi.
Zaphansi angaxhumana izinga laminate ukuthi kulingisa isihlahla zemvelo. Uma unquma ukusebenzisa ibhodi ke akumele ngesineke.
I charm ekhethekile lokhu igumbi zokwazi angadle ngabuhle obutheni kusuka nokusetshenziswa okufanele nendwangu. Cage Gingham - Indwangu yemvelo nge amaseli elincane imibala emibili. Okuningi evame ukusetshenziswa obomvu nomhlophe, nakuba kuvunyelwe, nezinye inhlanganisela. Amakhethini ngendlela angadle ngabuhle obutheni isitayela lokulala futhi ivame wenza lokhu Indwangu, kodwa ungakwazi izame ezinye izinto zemvelo.
Ngokwesibonelo, intambo amakhethini ezifekethisiwe nelineni ukunikeza ekamelweni piquancy ekhethekile. Bheka kwesihenqo okumangalisayo batiste omhlophe noma muslin, ehlotshiswe lace on emaphethelweni. Kuyathakazelisa ukubheka Indwangu indwangu. doormat wathungela ezenziwe kusukela izinsalela sendikimba emibala, okhaphethi nokwelukiweyo futhi ithrekhi elikhanyayo, noma utshani amacansi kuthiwa Lifanele lesi sitayela, ukugcizelela nobunye bomuntu ngamunye ezinhlelo egumbini.
Kulesi Igumbi ungathola ukuphila yesibili amakhabethe ubudala, sideboards, izihlalo ngokhuni. Zonke ifenisha (uthenge noma ezikhiqizwa bebodwa) kufanele kube isitayela ubudala. Namuhla kunezindlela eziningi ukuze ubudala izinkuni eyayenziwe. Ungasebenzisa upende cracelures, okubangela igolide patina.
Njalo wekhaya bazokutshela ukuthi ekhishini kubalulekile ikakhulukazi zonke ekhaya. Kulesi ikamelo, kufanele sinake Umklamo ophahleni. Cishe njalo it has imishayo. Ehlanganisiwe ngemibala mnyama they bekezelela ukuyamelana iphimbo egqamile futhi ukudala nomphumela omkhulu zokuhlobisa. Ngaphezu kwalokho, imishayo isebenze futhi umthwalo sokusebenza. Benza izinto zibe lula ukuze uhlanganyele izinyanda of amakhowe omisiwe, nezigaxa zezithelo zomvini amakhambi elimnandi, izinyanda zezinkuni, garlic kanye no-anyanisi. Bavame unamathisele futhi izibani ophahleni.
Imishayo singenziwa ka:
Ngesineke amapulangwe sokhuni;
Kuhle flooring for ikhishi kuyoba ngobumba, ukhuni eliqoshiwe noma itshe.
Ikhishi ngawengubo ekhishini isitayela rustic ukwenza zokugqoka omkhulu futhi amakhabethe. mbumbulu zabo kwahambisana ingilazi ifaka. Wall emashalofini ngokuvamile evuliwe. Ezimele ifenisha akufanele kube varnished noma ophucuziwe.
Ithebula kudingeka sithathe omkhulu, usayizi umxhwele. Ngaphansi babe kufanele sibheke nezihlalo esenziwe ngokhuni imihlane okusezingeni eliphezulu. Ukudala isitayela yesimanje angadle ngabuhle obutheni, ungasebenzisa Ababazi bakha ifenisha. Namuhla ungakwazi ukuthenga Ababazi bakha akuyona kuphela titulo nematafula kodwa emashalofini yokuqala ngisho amakhabethe.
Ekhishini, ahlotshiswe isitayela rustic, ubukeka ngaphezulu ngokuvumelanayo uma akusiyo tableware yesimanje eyenziwe ngepulasitiki ne ezinye izinto okungezona zemvelo. Lapha ukwamukela ubumba, ukhuni, izinto ezenziwe ngobumba, lensimbi nelethusi. kufanelekile Excellent elingaphakathi kanye tableware, ehlotshiswe imidwebo.
Futhi lokubhalela lapha kungaba ingilazi futhi amabhodlela ngobumba, izimbiza, izinhlobo ezahlukene. Ukuze isitoreji isinkwa noma izithelo basketry efanelekayo umvini.
Kungakhathaliseki nendwangu ezidingekayo ku ekhishini angadle ngabuhle obutheni?
Yebo, noma kanjani. Amakhethini lesi sitayela zenziwa izindwangu zemvelo. Njengomthetho, abazi kuhluke ukuncishiselwa eziyinkimbinkimbi, nakuba ruffles futhi frills wamukelekile. Ungenza izilenge obukhulu bafaniswe e isitayela vintage.
Kwendwangu yetafula njalo ezenziwe ngelineni elicolekile indawo, ezifana yelineni, umthunzi efudumele. Suit kanye nemikhiqizo, crocheted.
Ukwenza ingaphakathi endlini yakho (noma ingadi) e isitayela rustic, bonisa umcabango. imithetho ethile isitayela ukulandela kuyadingeka, kodwa ungakwazi izame ukwakheka kanye nemibala ezisetshenziswa.
Indlela ukukhetha design ngehholo lase indlu yangasese?
Ukuhlobisa. Ehlotshisiwe vase. Ngezandla.
Kufanele ibukeke ekamelweni intombazane?
Ukwelashwa Ukulala futhi ingaphakathi. Emakamelweni kanye nemvelo isikhala
Alopecia ezinganeni: Ubangela futhi Ukwelashwa. Alopecia, futhi Alopecia Imininingwane ezinganeni
Bacindezele 140 kuya ku-80? Kukhona isizathu sokucabanga.
Catacombs waseRoma: Umlando, Uhlolojikelele
Indlela ukudweba izindiza zempi ngezigaba ipensela? Step by step Umhlahlandlela